Knowledge – Shwewiki.com
ဘာသာရေးကို အကျိူးမမျှော်ပဲ ယုံကြည်စွာနဲ့လုပ်လ်ို့ အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီး နုပျိုလာတဲ့မအိုဆေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ မေကဗျာ
ပရိသတ်ကြီးရေ မေကဗျာကတော့ ဝါရင့်အနုပညာရှင် မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…။ သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲသဘောကျအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်းဒုနဲ့ဒေးပါပဲနော်…။ သမီးတစ်ယောက်အမေ ဖြစ်ပေမယ့် ဘအပျိုရှုံးအောင်နုပျိုလွန်းတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လို့ဆိုရမှာပါ…။ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားကာ live sale လေးတွေပဲ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေခဲ့တာပါ…။ ဒီနေ့မှာတော့”အဓိဌာန် …
May 26, 2022 By TM Z Knowledge
အသက်ကြီးလာတော့ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ဘုရားဝတ်ပြုပူဇော်တယ် မိမိဝန်းကျင်နဲ့ သာသနာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးပြုနိုင်သော လူဖြစ်ချင်မိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ မြတ်သူသူ
ပရိသတ်ကြီးရေ မြတ်သူသူကတော့ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်တတ်သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်း တလေးတစားဆက်ဆံတတ်သူလေးပဲ ဖြစ်တာကြောင့် ရန်ကုန်ပရိသတ်တွေသာမက နယ်ပရိသတ်တွေပါ အားပေးချစ်ခင်နေကြတဲ့သူလေးပါ…။ မြညိုဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေသိလာခဲ့ပြီးနောက် ရိုက်ကူးသမျှဇာတ်ကောင်တွေကို ပရိသတ်ကနှစ်ခြိုက်အားပေးဝန်းရံခဲ့ကြတာပါ…။ ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ အချစ်ရေးကိုလည်း ချစ်သူရှိကြောင်းပွင့်လင်းစွာ ချပြထားသူလေးပါ…။ အမြဲလိုလိုအလှူအတန်း …
May 25, 2022 By TM Z Knowledge
ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်ပေမယ့် ရင့်ကျက်တည်ကြည်ပြီး ခင်ပွန်းကောင်းပီသလှတဲ့ သားဂန်းရဲ့ အကျင့်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်ကတော့ အဆိုတော်သားဂန်းနဲ့ ရွှေလက်တွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ သမီးဦးလေးကိုယ်ဝန်ကိုလည်း လွယ်ထားရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်…။ သားဂန်းရဲ့ ဘေဘီမောင်အပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက သူတို့အတွဲလေးကို အားကျနေခဲ့ကြရပါသေးတယ်…။ ဘေဘီမောင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သားဂန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ “ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်ပေမယ့် ရင့်ကျက်တည်ကြည်ပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်သောယောက်ျား ၊ …
May 24, 2022 By TM Z Knowledge
မန္တလေးမြို့မှာ ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ဖေကြီးဦးမိုးဒီရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖေကြီး ပြုံးပျော်နေတာကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေခဲ့တဲ့ မိုးစက်
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဝါရင့်ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးမိုးဒီကတော့ သူ့ရဲ့သားတပည့်ဖြစ်သူ လူရွှင်တော်မိုးစက်နဲ့အတူ မန္တလေးမြို့ကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်…။ မိုးစက်ကတော့ မန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…။ ဦးမိုးဒီကတော့ မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးကို ရွှေသင်္ကန်းကိုယ်တိုင်ကပ်လှူချင်တဲ့ …
May 23, 2022 By TM Z Knowledge
ဖေချစ်သမီးလေးက ဖေဖေနဲ့ လက်သည်းညှပ်ပြီး ချစ်ကြည်နူးတစ်တီတူးနေတုန်း ခိုးရိုက်တာမိသွားလို့ မေမေရန်လုပ်နေတဲ့ ထရက်ရှာလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ လက်ရှိမှာချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သမီးလေးကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ သမီးလေးကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို …
May 22, 2022 By TM Z Knowledge
ဘယ်နှစ်ခါ ကြည့်ကြည့်မရိုးနိုင်ဘဲ သူမတူတဲ့ ညို့အားပြင်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သင်ဇာကတော့ sexy ကျကျနဲ့ စွဲမက်စရာ အလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေသူပါနော်…။ အချိုးအစားကျတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကို အားကျချစ်ခင်စေသူလေး ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်…။ ဒါအြပင် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကိုလည်း အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သင်ဇာလေးကတော့ ကျစ်လစ်သွယ်လျကာ ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလွန်းတဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို …
အနားယူတဲ့နေရာလေးက နေချင်စရာကောင်းပြီး စိတ်ကြည်လင်မှုရရှိစေတဲ့ ”စိတ်အေးချမ်းရတဲ့ နေရာလေး🤍 ဆိုပြီးသူမအခန်းလေးကို ပြသလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သဇင်ထူးမြင့် ကတော့ (၂၀၁၈) အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေ ပရိသတ်တွေ စတင်သတိထားမိလာတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒါရိုက်တာလဲဖြစ် ဟာသဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့ အထွေးဆုံးသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…။ ချစ်စရာကောင်းပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ဟန်ပန်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီး ရင်ကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့တဲ့အပြင် သူမကိုယ်သူမ …
May 21, 2022 By TM Z Knowledge
အမြဲပျော်ပျော်နေတက်သူတွေ ဒီတခါမှာတော့ စနောက်ရာကနေ ကျားလက်ဝါးနဲ့နဂါးလက်သည်းအဖြစ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
လူမှုကွန်ရက်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အတည်ပေါက်စနောက် ဆေးထိုးနေတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်နော်…။ သူတို့ကတော့ ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ video လေးကိုကြည့်ပြီးရယ်မောချစ်ခင်နေရတာပါ…။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်​ယောက်အလစ်ကို ထိုင်စောင့်ပြီးစနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်…။ တစ်ချိန်က video ဇာတ်ကားတွေနဲ့သိခဲ့ကြပြီး ခုမှာတော့လူမှုကွန်ရက်မှာ ပါပိုလူသိများလာတာပါ…။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အမြဲပျော်ပျော်နေတက်သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့်လည်း …
May 20, 2022 By TM Z Knowledge
သူ့ဘဝရဲ့ထူးခြားတဲ့ရိုက်ကွင်းလေးမှာ ချစ်ရတဲ့မေမေနဲ့တူတူ ကြော်ငြာလေးတွေရိုက်​နေတဲ့ video လေးကိုပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်
မေတိုးခိုင်ဆိုတာနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပါနော်…။ သူမကတော့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ တူမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေများစွာလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါနော်…။ အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် အချိန်တော်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်…။ မကြာခင်ကမှ လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး …
May 19, 2022 By TM Z Knowledge
ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေထိုင်တတ်တဲ့အပြင် ဆံပင်စတိုင်ပါ အမြဲပြောင်းနေသူမို့ ဆယ်ကျော်သက်လေးလို အမြဲနုပျိုလှပနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုပိုင်ရှင် မင်းသမီးတစ်လက်ပါနော်…။ သူမရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုလက်ရာမြောက်ကာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် မင်းသမီးတစ်လက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ…။ အမြဲရှင်းသန့်ကျော့ရှင်းကာ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုအမြဲလှပနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို ချစ်ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ရွှေကစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်…။ ဒီနေ့မှာတော့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ဆံပင်စတိုင်အသစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့​တဲ့ …
May 18, 2022 By TM Z Health, Knowledge